Tag: Ọchụchọ nyocha | Martech Zone
Kpido: nyocha anya
Omume 8 na Teknụzụ Ngwaahịa Ngwaahịa
Ụlọ ọrụ na -ere ahịa bụ nnukwu ụlọ ọrụ na -arụ ọtụtụ ọrụ na ihe omume. Na post a, anyị ga -atụle ọnọdụ kachasị elu na ngwanrọ mkpọsa. Na -echeghị nke ukwuu, ka anyị gaa n'ihu na ọnọdụ. Nhọrọ ịkwụ ụgwọ - obere akpa dijitalụ na ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche na -agbakwụnye mgbanwe na ịkwụ ụgwọ ịntanetị. Ndị na -ere ahịa na -enweta ụzọ dị mfe ma dị nchebe iji mezuo ihe ịkwụ ụgwọ ndị ahịa chọrọ. Na usoro omenala, ọ bụ naanị ego ka akwadoro
Imagga: Otu API maka Ngosipụta Ngosipụta Ngosipụta nke Kwadoro site na ọgụgụ isi
Tọzdee, Febụwarị 11, 2021 Tọzdee, Febụwarị 11, 2021 Douglas Karr
Imagga bu ihe ngosiputa ihe nlere anya nke ndi mmepe na ndi ahia ka ha tinye onyonyo n’ime onodu ha. The API awade a ọtụtụ atụmatụ, gụnyere: Categorization - Akpaghị aka categorize gị oyiyi ọdịnaya. Ike API maka nhazi onyonyo ozugbo. Agba - Ka agba mee ka ihe ngwaahịa gị pụtara. Ike API maka agba agba. Ihe ubi - Na-akpaghị aka wepụta thumbnails mara mma. Ike API maka ọdịnaya-maara ihe ọkụkụ. Omenala Ọzụzụ - Zụọ ihe oyiyi imagga AI iji hazie nke ọma
Thursday, February 11, 2021 Thursday, February 11, 2021
Netra Visual Intelligence: Nyochaa Nleta Gị Anya na Onlinentanetị
Wednesday, July 12, 2017 Tuesday, July 11, 2017 Douglas Karr
Netra bu mbido na-emepe emepe Nchoputa onyonyo onyonyo dabere na nyocha AI / Deep Learning emere na MIT Computer Science na Artificial Intelligence Laboratory. Sọftụwia Netra na-eweta usoro ihe osise a na-edozighi na mbụ na nghọta doro anya. N’ime milliseconds 400, Netra nwere ike tinye ihe oyiyi eserese maka akara ngosi akara, onyonyo onyonyo, na njirimara mmadụ. Ndị ahịa na-ekerịta foto 3.5 ijeri na mgbasa ozi ọha na eze kwa ụbọchị. N'ime ihe onyonyo ndi mmadu kesara bu ihe bara uru banyere ihe ndi ahia, ihe ha choro,
Wednesday, July 12, 2017 Tuesday, July 11, 2017
Ebee ka ndị ọbịa Pịa na Blog?
Mọnde, Febụwarị 2, 2015 Saturday, July 8, 2017 Douglas Karr
Anyị na-arụ ọrụ na ụdị ọhụrụ nke Martech ruo nwa oge. Anyị ka nwere ụfọdụ ihe mgbochi iji merie ka anyị na-agbanwe nhazi nke ugbu a ka ọ bụrụ usoro mmekọrịta mmekọrịta nke dị mfe iji maka ndị na-ere ahịa ịchọta ma nyochaa nzụta teknụzụ ha na-esote. Otu n'ime ule ndị kachasị anyị mere na nkwadebe bụ iwepu ụdị ọchụchọ ahụ (anyị nwalere ọchụchọ WordPress na ọchụchọ omenala Google) wee dochie ya
Monday, February 2, 2015 Saturday, July 8, 2017